Ihe ọhụrụ Apple Watch Series 3 bụkwa maka nke a 2017 | Esi m mac
Ihe ngosi ohuru nke Apple Watch nke 3 maka 2017 a
Asịrị banyere ntọhapụ nke ọhụrụ Apple Watch Series 3 ha na-amalite iru netwọk. O doro anya ma ọ bụrụ na a ga-ewepụta ụdị ọhụrụ a n'oge na-adịghị anya mgbe iPhone gasịrị, ya bụ na njedebe nke Septemba ma ọ bụ na ọ nwere ike iwe obere oge, mana na-eche na usoro nke ugbu a usoro 1 na Series 2 amalitela na Septemba, nke a ohuru ohuru o gha abia na onwa.
Na mgbakwunye na asịrị na-arịwanye elu asịrị banyere ọhụrụ iPhone 8 ma ọ bụ "XNUMXth ncheta", ndị Apple Watch ga-emelitere na ọwọrọiso mgbanwe dị ka elu processor ọsọ, a obere ihe obodo kwụụrụ na ihuenyo ọhụrụ ma ọ bụ iko nke onye na-eweta ngwaahịa ọzọ rụpụtara.
Na ụkpụrụ, mgbanwe nke ndị na-ebu ngwaahịa ma ọ bụ mgbakwunye nke ọwụwa anyanwụ ga-abụ n'ihi na ndị dị ugbu a ga-enwe nsogbu ịnye ndị nke Cupertino na ọ bụ ya mere TPK Holding ga-eji nweta enyemaka na imepụta ogwe ndị ahụ n'oge na-adịghị anya. N'okwu a anyị na-ekwu maka ụlọ ọrụ otu ụlọ ọrụ Hong-Kon a na-akpọ Biel Crystal arụpụta na onye ọzọ si Taiwan, General Interface Ngwọta.
N'ezie asịrị anaghị ekwu ọtụtụ ihe banyere nkọwa ma ọ bụ nkọwa a kapịrị ọnụ nke ụdị na-esote, mana a na-atụ anya na mmezi ndị a ga-etinye aka na ya ozugbo ma nke a na-eme ka anyị chee na Apple ga-anagide atụmatụ nke ngwaọrụ ahụ maka afọ ọzọ. Ọ bụ eziokwu na ọ bụ n'oge na-adịghị anya ikwu banyere Apple Watch Series 3, mana mmegharị iji nweta ihu na akụrụngwa dị ugbu a na usoro nke ụbọchị maka Apple, yabụ ọ bụghị ihe ijuanya na ha pụtara na netwọkụ ahụ ngwa ngwa. Anyị ga-ahụ ma ọ gụnyere Njikọ 3G ma ọ bụ ọ ga-ekwe omume ịfefe ikike nke ụdị nke ugbu a nke dịla ezigbo mma na-atụle ihe elekere na-enye anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » Apple Watch » Ihe ngosi ohuru nke Apple Watch nke 3 maka 2017 a
MacOS Sierra 3 ọha beta 10.12.4 ugbu a
Apple na-esonye na mkpakọrịta nke na-akwalite iwu maka nchịkọta nke ume